अझै गुड्दैछन् राजधानीमा ‘ज्यानमारा’ थोत्रे गाडी – Pahilo Page
१७ फागुन, काठमाडौं । गत फागुन ९ गते अपरान्ह महाराजगञ्जमा निकै विभत्स दुर्घटना भयो । विद्यार्थी बोकेको एक स्कुल बसले चकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान एमडी प्रथम वर्षमा अध्ययनरत प्युठान बिजुवार ७ का डा. संजीव सुवेदी र भारत बिहारका डा. सनि आनन्दलाई ठक्कर दियो ।
कान्ति बाल अस्पतालको पछाडिको सडक हुँदै बसुन्धरा चौकी निस्किने बाटोमा ट्राफिक नियमअनुसार नै सडकको बायाँ साइडबाट पैदल हिँडिरहेका डाक्टरद्वयलाई बसले झण्डै १ सय मिटर परसम्म घिसार्‍यो ।
२६ वर्ष पुरानो कवाडी बसले नियन्त्रण गुमाएपछि दुई महिनापछि बाबु बन्न लागेका सुवेदीको घटनास्थलमै ज्यान लियो भने भारतीय नागरिक डा. आनन्दले पनि अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्‍यो ।
सरकारी निर्णयअनुसार यस्ता थोत्रा गाडी सडकमा गुड्न दिनै नहुने हो । तर, कवाडीमा बेच्नुपर्ने ५ हजार भन्दा बढी सार्वजनिक सवारी अहिले उपत्यकामा विद्यार्थी, कर्मच्ाारी र सर्वसाधारण यात्रु बोक्ने काममा संलग्न रहेको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठ बताउँछन् ।
उपत्यकामा गुड्ने १० हजार सार्वजनिक सवारीमध्ये ५० प्रतिशत सवारी यस्तै ‘ज्यानमारा’ बन्न सक्ने देखिएको छ । देशभरमा २० हजार सार्वजनिक सवारी यस्तै कवाडीको सूचीमा छन् ।
महाराजगञ्जमा ठक्कर दिने बा १ य ४३ नम्बरको उक्त बस ग्लोबल टुर्स एन्ड ट्राभल्सको नाममा छ र त्यसमा हरियो प्लेट छ । हरियो प्लेटको गाडी पर्यटक बोक्न प्रयोग गरिन्छ । तर, सो बसमा विद्यार्थीहरु सवार थिए ।
ब्लु-बुकअनुसार उक्त बस सन् १९९० सालमा बनेको देखिन्छ । कानुनले २० बर्ष पुराना गाडी काठमाडौं उपत्यकामा चलाउन बन्देज लगाएको छ । तर, पैदलयात्रुको ज्यान लिने सो बस २६ वर्ष पुरानो हो ।
अहिले सरकारले किन यस्ता ज्यानमारा सार्वजनिक सवारी हटाउन चासो दिँदैन र विद्यार्थी तथा यात्रु बोक्ने जस्तो संवेदनशील काममा प्रयोग गर्न दिइन्छ ? भन्ने सवाल अहिले उब्जिएको छ ।
यातायात विभागका महानिर्देशक भने २० वर्ष पुराना गाडी हटाउने निर्णय भएपनि पछिल्लो पटक यातायात मन्त्रालयले त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको बताउँछन् ।
‘नयाँ सवारीको दर्ता गर्दा आयु २० वर्ष तोक्ने काम भइरहेको छ । तर, मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार थोत्रा सवारीको नवीकरण पनि गरिरहेका छौं’ उनले भने-‘पुराना सवारी जति पुरानो भए पनि नवीकरण गर्ने काम नरोकिएको सत्य हो ।’
मन्त्रालयले आफ्नै निर्णय रोक्दै कवाडमा फाल्नुपर्ने गाडीको नवीकरण जारी राख्दै सडकमा गुडाइराख्न किन निर्देशन दियो भन्ने महानिर्देशक श्रेष्ठलाई जानकारी छैन । ०७० को मंसिरसम्म उपत्यकाबाट यस्ता गाडी हटाइसक्ने सरकारी योजना कार्यान्वयनमा आर्थिक चलखेलको आशंका गरिएको छ ।
विभागका प्रवक्ता बसन्त अधिकारी पनि कानुनतः २० वर्ष पुराना गाडी सञ्चालन गर्न नपाइने बताउँछन् ।
मन्त्रीपरिषद्को निर्णयलाई मिच्दै सामान्य परिपत्र देखाएर विभाग र मन्त्रालयका अधिकारी २० वर्ष पुराना गाडीको नवीकरण र नामसारी गर्दै कमाउ धन्दा चलाइरहेको स्रोतको दावी छ ।
विभागका प्रवक्ता अधिकारी भने अब पुराना गाडी हट्ने बताउँछन् । ‘पुराना गाडीले प्रदुषण बढी हुन्छ, तेल बढी खान्छ, स्वास्थ्यमा असर गर्छ, सुरक्षामा असर गर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले २० बर्ष पुराना गाडीहरु हटाउनै पर्छ । पुराना गाडी हटाउँदै जानै हाम्रो पाँच वर्ष योजना नै छ ।’
काठमाडौंमा २० वर्ष पुराना गाडीहरु कति छन् भन्ने एकिन तथ्यांक छैन । यातायात व्यवस्था विभागले सबै गाडीहरु कम्प्युटरमा अभिलेखीकरण गर्ने काम जारी राखेको छ ।
पुराना गाडीहरु विस्थापन गर्ने योजनाअनुसार त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट पुराना ट्याक्सीहरु हटाइसकिएको छ ।
‘तर यो ट्याक्सीको सवालमा मात्र लागु भएको छ अरु त पुरानै गाडीहरु चलिरहेका छन्, जसका कारण कडा नीति नियम जरुरी छ,’ विभागका प्रवक्ता अधिकारीले भने ।
लाइसेन्स हलुका, गाडी ठूलो
महाराजगञ्जको घटनापछि प्रहरी हिरासतमा रहेका बस चालक अर्जुन सेवाले ओरालोमा ब्रेक फेल भएर दुर्घटना भएको र डाक्टरद्वयको ज्यान गएको प्रहरीलाई बयान दिएका छन् ।
बस चालकसँग हलुका गाडी चलाउने लाइसेन्स छ र २०६३ सालमा वागमती अञ्चल कार्यालयबाट लाइसेन्स लिएका उनी हालसम्म २६ पटक कारवाहीमा परिसकेका छन् ।
हलुका सवारी साधन सञ्चालन अनुमति पत्र बाहकलाई ठूलो गाडी चलाउन दिइएको र पटक पटक ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेको यसबाट पुष्टि हुन्छ ।
‘यति धेरै कारवाहीमा परिसकेका चालकलाई गाडी चलाउन दिइरहनुले विद्यालय सञ्चालक र ग्लोबल टुर्स एण्ड ट्राभल्सका सञ्चालक पनि दोषी छन्,’ एक ट्राफिक प्रहरीले भने ।
प्रहरीका अनुसार आजभोलि नयाँ गाडी दर्ता गर्दा गाडीको २० वर्षको आयू तोक्ने गरिन्छ । पहिले भने त्यस्तो नियम थिएन । २० वर्षभन्दा पुराना गाडीहरुको इन्जन र पार्टपूर्जा काम नलाग्ने भइ जोखिम बढेपछि यात्रु बोक्न बन्देज लगाइएको छ ।
तर, त्यस्ता पुराना गाडीहरु ‘शान्ति क्षेत्र’ घोषित विद्यालयमा प्रयोग हुने गरेका जानकारहरु बताउँछन् ।
२० वर्षपछि ब्लु-बुक फेल भएर चलाउनै नपाइने गाडी यातायात व्यवसायीले बोर्डिङ स्कुल सञ्चालकहरुलाई बेचिरहेका छन् । अहिले उपत्यकाका धेरै बोर्डिङ स्कुलले यस्ता थोत्रा कवाड गाडीमा विद्यार्थी बोकिरहेका छन् ।
यी गाडीले कता गएर कसको ज्यान लिने हो वा आफैं नियन्त्रण गुमाएर विद्यार्थीलाई मृत्यु शैयामा पुर्‍याउने हो भन्ने निश्चित छैन ।
यस्ता गाडी स्कुल सञ्चालकको हातमा पुर्‍याउन थोत्रा गाडीका मालिक र जिम्मेवार सरकारी अधिकारीहरु कै मिलोमतो देखिएको प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् ।
आर्थिक प्रलोभनमा यातायात मन्त्रालय र विभाग थोत्रा गाडी हटाउने विषयमा गफ मात्रै चुटिरहेको उनीहरुको दावी छ ।
ठूला विद्यालयहरुले नयाँ गाडीहरु किनेर विद्यार्थी बोक्न प्रयोग गरे पनि धेरैजसोले पुरानै गाडीका धनिसँग सम्झौता गरी भाडामा लिएर विद्यार्थीहरु विद्यालयमा ल्याउने र घर पुर्‍याउने गरेका छन् ।
‘धेरैजसो काम नलाग्ने थोत्रा गाडीहरु चलाउनु र त्यसमा ससाना विद्यार्थीहरुको समेत ज्यान जोखिममा पारेर चलाइनुले बाल अधिकारको सर्बमान्य मूल्य मान्यताविपरित त छ नै हाम्रा बालबालिकाहरु शान्ति क्षेत्रभित्रै असुरक्षित छ भन्ने देखिएको छ,’ अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रमेश मल्लले भने, ‘घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई अबिलम्ब कारबाही हुनुपर्छ ।’
कानुनविपरित २० वर्ष पुराना गाडी चलिरहे पनि ट्राफिक प्रहरीलगायतका सम्बन्धित निकायले आँखा चिम्लिएको जनगुनासो छ ।
महाजगञ्ज दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका डा. संजीवका आफन्त नवराज सुवेदीले ठक्कर दिने बस चालक, कानुनविपरीत पुरानो बस चलाउन दिने ट्राभल्स सञ्चालक र विद्यालय सञ्चालकलाई कारबाही गर्न माग गरे ।
‘बस २६ वर्ष पुरानो हुनु र चालकले ब्रेक नलागेर दुर्घटना भएको भन्नुले बस चलाउने कन्डिसनमा नहुँदा नहुँदै पनि चलाइरहेको पुष्टि हुन्छ,’ मृतकका आफन्त कृष्णध्वज खड्काले भने, ‘बालबालिकाको ज्यान जोखिममा पारेर बस सञ्चालन गर्ने ट्राभल्स धनी र विद्यालय सञ्चालकलाई पनि कारवाही होस् ।’
– See more at: http://www.onlinekhabar.com/2016/02/394318/#sthash.HF9RDJ7u.dpuf
प्रकाशित मिति : बुधवार, फाल्गुण २६, २०७२ समय : १५:४७:०१ 691 पटक पढिएको